3D, mifananidzo, Linux uye Windows | Linux Vakapindwa muropa
Maererano ne Mubvunzi:
"Muindasitiri yemafirimu Linux yakakunda, ichishandiswa mumaseva ese nematafura akatsaurirwa kuopikicha kana kugadzirwa kwezvakakosha," anodaro maindasitiri.
Zvinodaro Robin rowe, kubva pasuo bmuchina.org, uye ndinofunga isu tinofanirwa kumbomira zvishoma kuti tifunge nezvazvo, nekuti zvinoratidzika kwandiri kuti murume uyu ari kufambira mberi makore mashoma.
- Kune maviri mapurogiramu ehunyanzvi ekugadzira 3D uye mifananidzo kune chero epamusoro firimu kugadzirwa: Maya uye Softimage. Nezve yekutanga, Autodesk vawana yavo software kuti igadzikane uye yakavimbika pamusoro Linux. Nezve wechipiri, vhezheni yayo ye Linux. Chris mitchell, mukuru weanopopota mukuru we ILM makomendi:
Pakati pekugadzira (StarWars), ILM yakaisa inogadziridza kuSoftimage | 3D, iyo yaizopedzisira yava Softimage | 3D 4.0 kutora mukana wezvinhu zvitsva zveshanduro uye kushandura makomputa ayo eIRIX kuita zviteshi zveLinux zvine mari uye zvine simba. Softimage | 3D paLinux ndeye yakatanhamara 3D animation system.
Nekudaro, ini ndiri, padiki diki uye ndakazvimiririra, ndichishanda mundima imwechete, hazvina kukwana kukwana kuti software yedu yatinoda iratidze paLinux. Semunhu anogadzira peji rewebhu, pane akati wandei software inopedzisa redu rekupedzisira basa, uye kazhinji, iwo ese anotakurwa panguva imwe chete. Photoshop, Premiere, Kubatana, Corel, Flame, uye yakareba etc. , zvirongwa zvinoshanda pa WindowsKusvikira munguva pfupi yapfuura, zvirinani.Vanofanirwa here kuimba kukunda uye kukunda muhondo, kana isu tiri kumhanya?
Izvozvi hazvisati zviripo Adobe yeLinux, Corel yeLinux, blablabla yeLinux, uye kumhanya navo, isu tinofanirwa kushandisa waini o Virtualbox, uye kwete shanduro dzazvino, asi diki diki kana yechinyakare, kana isu tinofanirwa kushandisa mahara "zvakaenzana", senge Blender, Gimp, uye zvimwe zvinhu zvandisingafarire. Saka ... Zvinoita here kuenda kune imwe OS nhasi chaizvo?
Ini pachangu ndiri kurwara nemhando idzi dzemhinduro, yakatorwa kubva pano:
«Mubvunzo: Pane 3d max ye linux? Kana iripo, ndokumbirawo mundibatsire kundiudza kwandingaiwane, ndatenda.
Mhinduro: Chinhu chepedyo chaunofanira kuenda kuGNU / LINUX IBLENDER.
Ngatione kana ndikati 3D Max, uti 3D Max, kwete hafu yemignon uye chirongo chenizi. Zviri nyore seizvozvo. Handina kupedza makore gumi ndichidzidza 3D Max saka izvozvi ndinofanira kuenda kune chimwe chirongwa chinoita chetatu pane zvandiri kuda.
Zvakatipoteredza zviri kuchinja, ichokwadi, Linux inoshandisa uye inogadziridza zviwanikwa zvakanyanya kupfuura Windows, Linux ndeye mahara uye yemahara, asi ngatiendei nzira: Linux haina kukudzwa zvakadaro uye haina software yepasi petsoka dzayo. Zvakanaka, zvakanaka, zvese zvakanaka, asi ini ndinofunga kuti tiri kutaura pamberi penguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » 3D, mifananidzo, Linux uye Windows
Ini ndinobvumirana newe, Linux iri OS ine simba kwazvo, ine mikana yakawanda, iyo inopfuura zvakanyanya Windows, kana tichitaura nezve OS chete, yakangoiswa. Asi kana zvasvika pakushanda, mune dzimwe nzvimbo senge graphic dhizaini, webhu, 3D, kugadzira maseketi emagetsi, nezvimwe, zvinosuwisa, Linux yasara kumashure, zvirinani izvozvi. Sei? nekuda kwekuti hapana nzira, iro rakavhurika sosi, kukwikwidza kubva ku0 vachipesana neindasitiri hofori, ini ndinotora Adobe semuenzaniso, uye ndokuirova nekukurumidza. Hongu, ndinotarisira kuti rimwe zuva tichakwanisa kushanda zana muzana muLinux, tisingatombonetseke nezvekuve nema windows echirongwa che x chatinoda, hongu kana hongu. Parizvino, ini ndaishandisa windows vista uye ubuntu, asi ikozvino ndiri (kubvira nezuro) ndichihodha zvese zviri zviviri, kuisa xp mubhokisi chairo mu ubuntu, kumhanya kubva ipapo zvirongwa zvandinoda kubva windows, kuti ndikwanise kuzvishandisa zvishoma sezvinobvira.
Ziva kuti ini ndinosarudza Linux sisitimu yekushandisa, asi ini handina imwe sarudzo kunze kwekushandisa zvirongwa zveWindows, kunyangwe ndichiida kana kwete. Asi ini ndinovimba nemoyo wese kuti rimwe zuva hatichadi kushandisa windows.
Ndine maonero akasiyana kwazvo.
Paunobvunza nezve 3dmax, chirongwa ichi ndeche windows. Kana iwe wakashandisa mari pazviri uye munzira yekuidzidza, usachinje. Iko hakuna 3dmax ye linux, nekuti ivo havazokwanise kushandisa iro zita rimwe chete, kana varidzi vacho havana kuisimbisa.
Kune vazhinji vashandisi vanoti: Ini ndinoda Shoko reLinux, ini ndoda Photoshop yeLinux, uye ndezvese nekuti vanhu vajaira kushandisa zvirongwa izvi sezvo vaine komputa, uye zvinoshamisa kushandura. Uye mhinduro ndeyekuti, chinja. Nekuti kana iwe ukachinja iyo Inoshanda Sisitimu, iwe unofanirwa kushandura zvirongwa zvaunoshandisa, izvo kunyangwe chiri chokwadi, mazhinji mapurogiramu ane vhezheni yavo yeLinux, mune mamwe akawanda ivo havana, ini ndinogona kuzvironga iwe pachako, kana iwe unoshandisa imwe iyo ine hunhu hwakafanana, asi nenzira yake.
Ini ndakaguta, sekutaura kwako, kwevanhu vanotsvaga '3dmax ye linux' uye vasingagamuchire mhinduro dze 'shandisa blender', uye usazvigamuchire nekuda kwekuti zvimwe havadi chirongwa ichi, kana nekuti ivo ndisingazive mashandisiro acho. Ini ndinoshandisa uyu muenzaniso zvakare kukuudza kuti chirongwa CHIKURU chandakatodzidza kushandisa (munguva shoma pane yandakadzidza 3dMax) uye kuti ndinowana mhedzisiro (asi izvi ndinofunga zvinobva pane zvakaitika).
Ini ndinokukurudzira kuti ufungezve maonero ako (ini handidi kuti iwe uchinje), uye fungidzira kuti chii chingaitika kana komputa yekutanga iwe waive neLinux, Blender, uye ese iwo mapurogiramu, waizoshandiswa chii?
Kuti ufarire Linux, unoiviga kwazvo.
Iyo poindi ndeyekuti pane zvinhu muWindows izvo zvinogona kunge zvisingaite zvizere muLinux, asi kune zvimwe zvakawanda zvinhu muLinux zviri nani kwazvo kupfuura Windows. Pakazara, inobhadhara kuva Linux.
Nechikonzero chimwe chete ini handaizotenga mac. Ndakave nepc kwenguva yakareba, ndakajaira, zvinondishandira, zvakandikwanira uye ndine zvakawanda. Nei ndaizotenga mac ???
Ini ndinofunga kusiya parutivi chokwadi chekuti windows kana GNU / Linux, isu tinofanirwa kutarisa kumashure kwezvose, tione kuti pese panokanganisika chinhu muGNU / Linux, ngatitaurei nezveUbuntu kunyanya, tinogara tichipa mhosva iyo OS, kana iri iyo Hardware, imhosva yeUbuntu, kana pasina chirongwa, imhosva yeUbuntu, asi ini ndinofunga kuti zvinonyatsoitika ndezvekuti Hardware neSoftware makambani anofanirwa kutendeuka kuti aone idzi niches dzemusika, zvichaita kuva chokwadi Kwete kunyange 1% yevashandisi vane GNU / Linux yakafukidzwa, asi isuwo tinobvumirana kuti makambani mazhinji makuru atove vashandisi veGNU / Linux, kana kadhi isina waya iri palaptop yako isingashande muUbuntu, haisi mhosva yavo. SHOKO kukanganisa kwemugadziri iyo isingape mhinduro izere, uye izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvibvumirano izvo Micro $ kazhinji zvine makambani aya, asi vanofanirwa zvakare kufunga nezvevashandisi vasingafarire kushandisa windows neimwe nzira kana imwe, uye izvi zvakare ndezvevakagadzira software, ivo vanofanirwa kuona musika wakazara, uye ndichitsvaga nzira yekuita bhizinesi, nguva dzinoshanduka, ndinobvuma kuti zvinokurumidza kukwidza izwi rekukunda, asi zvinofanirwa kuonekwa sekudaidzira kwekucherechedza kune iwo makambani anoteerera zvese zvinogona kusvikwa Kuti uite kudaro, kana hombe zvigadzirwa zvefirimu zviri kushandisa iyi OS, zvinogona kuita kuti mhinduro dzemhando yepamusoro dzitange kugadzirwa, kana idzo dziripo dzichakura. Ndiwo maonero angu, ndisina kudzivirira zvizere chero SO.
Maererano newe. Ini handidziviriri chero munhu. Ini ndinongo bvunza iyo mhere yekukunda, inouya makore mashanu apfuura.
Blender chirongwa chiri nani pane 3DMax
naaa… .kasati. Izvozvi blender inoshandisa furhu, machira, uye zvimwe zvinhu izvo max yanga ichishandisa kwemakore.
Mukana uyu ndewekuti muBlender une chigadzirwa chisingafi chisingatsamire pane chero kambani uye chichaenderera nekushanduka nekusingaperi.
Kune rimwe divi, uine 3DMax iwe wakabatanidzwa kune imwe kambani, unosungirwa kushandisa zvidzoreso zvavanosarudza, usingakwanise kuita zvaunofunga kana iwe uchida kubhadhara mumwe mugadziri ... uye zvakare kana rimwe zuva kambani inoenda kubhuroka kana kufunga kumira kumisa kuburitsa 3DMax Hapana munhu anozokwanisa kutora chirongwa zvakare nekuti hapana munhu achave nekodhi kodhi, uye kunyangwe kuve nekwavo hakungave pamutemo.
Ferk, 3D Studio DOS ndiyo yakatanga kuburitswa uye yaive muna 1990. Shanduro dzinoverengeka gare gare chirongwa ichi "chakadzikiswa" uye chakatengwa nekambani yeDiscreet. Makore akati wandei gare gare, yakatengwa na Autodesk. Yakanga iine gumi nemashanu ekugadziriswa, pamwe nekuvandudzwa kweshanduro yega yega.
Blender akaberekwa muna 1995, makore mashanu gare gare, uye yaive nemaviri maBhaibheri pamwe nezvakawanda zvakagadziridzwa uye kugadzirisa.
Ini ndinofunga Ferk kuti urikupenda nyika iyo iwe yaungade kuti ive, uye kwete nyika sezvazviri. 3DStudio max haizombowira mukusashandiswa, kana blender, ese ari maviri achave nekugadziridzwa uye kugadzirisa izvo ivo programmers vanofunga kuti inofanirwa kuve nayo. Ini handizive maitiro ekuronga, kana neniwo handizozviziva, saka ini handifarire kuziva kuti ne blender ndinogona kuzvishandura chero ini zvandinoda. Ndiri kufarira izvo zvinogona kugadzirwa nechirongwa, uye kusvika parizvino, blender haisati yasvika padanho rehunyanzvi re3D Max, ndoda Maya, kana Softimage. Nyika ingadai yakave yakanaka dai huswa hwaive hwakasvibira uye hwachekwa pachahwo, asi hunenge huri kutenda mune chimwe chinhu chisingazomboitika.
Tevere ini ndichaenda kukuudza kuti ndeapi mapurogiramu atinogona kushanda nawo mukati meiyo 3d nharaunda muLinux.
Kutanga ngatitange nekutaura zvirongwa zvinotibvumidza kuti tigadzire nekumutsa zvinhu zve 3d:
Chechipiri, zvirongwa zvinotibvumidza kunyora uye kuveza mamodheru 3d:
Chechitatu, zvirongwa zvinotibvumidza kunyora uye kugadzirisa edu 3d maficha:
-Nuke, Fusion, Flame, Flare, Inferno, Flint, Utsi, Luster
Pindura kuna herbert
Cesar Bustamante akadaro
Ndanga ndichishanda nehunyanzvi 3D dhizaini nemifananidzo kwechinguva, kutaura chokwadi ndanga ndiri mubhizinesi kwemakore gumi nemaviri, uye handimboshandisa Maya, kana 12DMax, uye kunyangwe kushandisa Windows OS nguva dzose shandisa blender, gimp, inkscape, Wings 3d, uye zvimwe zvakawanda zvishandiso Iwo anowanikwa kune iyo Linux OS ... uye ini ndinoreurura, ini handitombozive mashandiro akabhadharwa mashandisirwo anoshandiswa ... Ini ndinofunga inyaya yekuravira uye hupfumi chiyero. Kana mwana akazvarwa kuChina panguva imwe chete achitaura chiChinese uye asinganyatsogona kutaura chiSpanish asingasarudze kudzidza, zvakafanana zvinoitika nema winderos (kwandiri ini tinovadaidza kuti Guindow) vanoda kubhadhara zvese ... ivo don ' shinga kushandisa Linux uchitya kutadza ...
Pindura kuna César Bustamante